Nei sevha ichifanira kuiswa mukamuri yemakomputa? - Goldenor Magetsi Technology Co., Ltd.
Imba > Nhau > Indasitiri Nhau > Nei sevha ichifanira kuiswa mukamuri yemakomputa?
Nei sevha ichifanira kuiswa mukamuri yemakomputa?
Kunyangwe iyo webhusaiti inogona kukura zvine hutano kana kwete, zvinonyanya kukosha kusarudza yakakodzera server nzvimbo, iri zvakare iri yakajairika musoro mune indasitiri. Heino rondedzero ipfupi yezvinhu zvinoda kutariswa pakusarudza sevha, kuitira kuti ma novices azvizive nekukurumidza sezvazvinogona. Nzira yekusarudza sevha inogona kutariswa kubva kune mana maficha: sevha hutano, kudzikama, yekumhanyisa yekumhanyisa, uye basa rekutsigira:
(1) Hutano hwe server Hutano hwe server hwataurwa
pano inonyanya kutariswa kubva kune mamwe mawebhusaiti ayo anogovera iyo imwechete IP network segment sevha. Mamwe mawebhusaiti pane imwechete sevha uye imwechete IP network segment yakadzikiswa nekuda kwekushandiswa kwechitema ngowani kubiridzira. Kurudyi, kana webhusaiti yako iripowo pane ino server panguva ino, kunyangwe iwe usati wakashandisa chero nzira dzekubiridzira uye usina marekodhi akashata, unogona kuve wakanyanyobatanidzwa uye kubviswa pachigaro panguva imwe chete. Pane akamboitika akadaro. Pakarepo mufananidzo wewebhu webhusaiti iyo yagara yakajairika yadzokera kumwedzi wapfuura uye kuiswa kwayo kwakamira. Mushure mekutarisa zvekunze zvinongedzo zvewebhusaiti uye nezviri mukati mewebhusaiti kuona kuti hapana dambudziko, dzimwe nzira nhema dzeheti dzinowanzoshandiswa kukurumidza kuzadzisa chinangwa, chinova chirango chakareruka. Naizvozvo, isu patinosarudza webhusaiti webhusaiti, tinofanirwa kutarisa kana IDC ichibvuma kuisa rudzi urwu rwewebhusaiti, uye tione kana paine aya marudzi emawebhusaiti muIP network segment inotengwa uye kana paine huwandu hukuru hwemawebhusaiti ane akatongerwa kudzikisira. Webhusaiti yako ndeyakanyanya kunetsekana.
(2) Kugadzikana kweserura kwakakoshawo zvakanyanya mukugadzikana kweseva. Kana yako sevha nzvimbo kazhinji isingakwanise kuvhurwa matatu kusvika mashanu, inofanirwa kunge iri nharo huru kune webhusaiti. Iyo inowanzo kuoneka kana injini dzekutsvaga dzichitsvaga webhusaiti yako. Kamwe kamwe ikatadza kukambaira, izvi zvinoita kuti webhusaiti yako irege kuvimbwa neinjini dzekutsvaga, idzo dzinodzikisira zvakanyanya kukambaira nekukamba kwespider spider, kuitira kuti kuiswa kwemapeji ewebhusaiti kuchanyatso kukanganiswa, kunyanya kune Zvemasaiti matsva pasina chero kurema, injini dzekutsvaga dzinogara dzichifunga kuti webhusaiti yako haina kugadzirira, kana kufunga kuti wavhara webhusaiti yako. Ini ndakamboshandisa imwe yemahara nzvimbo pamberi, uye iyi mamiriro inowanzoitika. Iyo webhusaiti haigone kuvhurwa kwemazuva matatu uye haigone kugadziriswa nekukurumidza, saka webhusaiti yacho inosara neiyo peji remberi, uye iyo webhusaiti snapshot yadzokera kumwedzi mishoma yapfuura, Ichisati ichiwana uye ichingo sanganisira mapeji matatu. Naizvozvo, isu patinosarudza iyo nzvimbo, isu hatigone kutenga chero chinhu chakachipa. Isu tinofanirwa kufunga nezve kudzikama kwemugadziri uye titarise mukurumbira. Zvakanakisa kuve nenguva yekuyedza.
(3) Server yekumhanyisa mhanyisa
Kuti tidzivise dambudziko rekufilita kwewebhusaiti, vazhinji vepamhepo vatenzi vewebhu vanosarudza mhiri kwemakungwa vanoisa mawebhusaiti avo. Yekumhanyisa kumhanya kwenzvimbo zhinji dzakaderera seva munzvimbo muChina iri kunonoka kwazvo. Izvi zvinokanganisa zvakanyanya ruzivo rwevashandisi vewebhusaiti. Kana isu tavhura Kana mhinduro yewebhu peji ichinonoka, isu tinowanzosarudza kuvhara iyo webhusaiti zvakananga, izvo zvinowedzera zvakanyanya bounce mwero wewebhusaiti. Panguva imwecheteyo, kana tsandanyama dzeinjini dzekutsvaga dzikauya kuzokambaira pamapeji edu ewebhu, vanoshanyira webhusaiti yedu semushanyi. Ehe, kana dandemutande riri kukamba peji rikavharwa, rinogona kukanda mapfumo pasi ndokumira kuramba richikambaira. Panguva ino, kuiswa kwewebhu webhusaiti kuchakanganiswawo. Chinangwa chekupedzisira cheinjini dzekutsvaga ndechekushandira vashandisi, uye iyo inononoka yekumhanyisa yekumhanyisa inowedzera iyo bounce rate. Iyo webhusaiti haifadzi zvachose. Naizvozvo, patinosarudza sevha nzvimbo, isu tinofanirwa kusarudza yepamusoro-soro nzvimbo nekukurumidza kupinda nekukurumidza.
(4) server inotsigira basa
server rutsigiro inosanganisirawo akawanda maficha, ehe, iyo yakazara zvakakwana zvirinani, kunyangwe kutsigira iyo yakamira url ibasa rakakosha kwazvo, ingave linux kana windows inomiririra inomiririra inogona kutsigira chiitiko ichi, Kuita basa rakanaka re URL static iri zvakare zvakanyanya inobatsira SEO. Panguva imwecheteyo, mamwe mauto anotsigirawo 301 redirect uye 404 mapeji, ayo anogona kumisikidzwa akananga kumashure kweanogamuchira, ayo ari nyore kushandisa. Panguva imwecheteyo, isu takaonawo kuti mamwe mauto haatsigire matanda eseva. Izvi hazvina kunaka kuti isu tinzwisise mamiriro ewebhusaiti. , Zviri nani kusarudza izvo zvinogona kutsigirwa. Nenzira iyi, isu tinokwanisa kunzwisisa iyo chaiyo mamiriro ewebhusaiti nekutarisa sevha danda.
Zvese mune zvese, yakanaka server nzvimbo ine maitiro makuru pawebhusaiti. Nzvimbo yakagadzikana inogona kubvumidza webhusaiti kuti ikure zvakatsiga uye nekuenderera. Iyo yepasi-yemhando nzvimbo inogona kuita yako yapfuura kuyedza pasina, saka tiri kusarudza server nzvimbo Inofanirwa kuve inofungidzirwa.
Yapfuura:Chirevo chekutsvagisa chinoti China yepamhepo server indasitiri cheni iri kusimbiswa zvishoma nezvishoma
Tevere:Nzira yekusarudza sevha chassis nekuita kwakanaka